Superfoods कि तपाइँ तपाइँको आहार मा शामिल गर्नु पर्छ | बेजिया
टोय टोरेस | 14/09/2021 20:00 | स्वास्थ्य सल्लाहहरू
जब यो पोषण र खाना को लागी आउँछ, तपाइँ कहिल्यै भन्न सक्नुहुन्न कि सबै कुरा लेखिएको छ। किनभने, सौभाग्य देखि, हरेक दिन नयाँ अनुसन्धान र खाना संग सम्बन्धित अध्ययन र यसले हामीलाई आन्तरिक रूपमा कसरी असर गर्छ। यो प्रमाणित भएको छ कि पकाएको सबै चीज एक तरीकाले वा अर्कोमा असर गर्दछ। र उही तरिका मा कि केहि खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य को लागी हानिकारक छन्, अरु को लागी विशेष गरी यसको लागी अनुकूल छन्।
केहि खाद्य पदार्थहरु मा पदार्थ र पोषक तत्वहरु छन् कि प्रतिरक्षा प्रणाली लाई बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ। के भाइरस, ब्याक्टेरिया र रोगहरु को सबै प्रकार को बिरुद्ध सुरक्षित हुन आवश्यक छ। यी खाद्य पदार्थहरु "superfoods" भनिन्छ र एक नियमित आधार मा उनीहरुलाई आहार मा समावेश गर्दछ, तपाइँ स्वस्थ, बलियो र भित्र बाट सुरक्षित हुन मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ.
1 सुपरफूडहरू के हुन्
2 Superfoods कि तपाइँको आहार मा हुनु पर्छ
2.1 Acai जामुन
2.2 चिया बीज
2.3 Matcha चिया
सुपरफूडहरू के हुन्
जे होस् उनीहरु केहि बर्षहरु को लागी फैशनेबल बनेका छन्, superfoods केहि नयाँ छैन। यो अधिक छ, खाद्य पदार्थ हो कि पहिले नै हाम्रो भूमध्य आहार को हिस्सा हो, जस्तै जैतून का तेल। जे होस्, superfood को रूप मा जानिन्छ कि धेरैजसो बीउ, जामुन र विदेशी खाद्य पदार्थ हो, यो के हो उनीहरुलाई विशेष र धेरै मानिसहरु को लागी अनौठो बनाउँछ।
शब्द superfood आफैमा कुनै वैज्ञानिक आधार छैन, तर यो स्वीकार गरीयो किनभने यसको परिभाषा खाद्य पदार्थहरु कि विशेषाधिकार प्राप्त सूची भित्र पर्छन् को पौष्टिक गुणहरु को मामला मा धेरै यथार्थवादी छ। चूंकि superfoods संग खाना हो एक उच्च पोषण मूल्य जो महान स्वास्थ्य लाभ प्रदान गर्दछ, जस्तै antioxidants, भिटामिन, वा स्वस्थ बोसो।
Superfoods कि तपाइँको आहार मा हुनु पर्छ
Superfoods को सूची अधिक र अधिक व्यापक हुँदै गइरहेको छ, किनकि ती उत्पादनहरु हुन् कि एक धेरै हद सम्म जैविक खेती बाट आउछन् र धेरै भन्दा धेरै कम्पनीहरु सबैभन्दा प्राकृतिक र स्वस्थ खाना को वकालत गर्दै छन्। अब, यो याद गर्नु पर्छ कि एक खाना मात्र स्वास्थ्य सुधार गर्ने क्षमता छैन। एक स्वस्थ आहार सन्तुलित हुनुपर्छ, विविध र मध्यम। यदि तपाइँ पनि यी superfoods समावेश, तपाइँको शरीर सबै गुणहरु बाट लाभान्वित हुनेछ।
यो फल ब्लूबेरी जस्तै एक antioxidants को यसको उच्च सामग्री को कारण स्वास्थ्य को लागी सबैभन्दा लाभदायक मध्ये एक हो। साथै, açaí जामुन छन् ओमेगा 3,6र9फैटी एसिड मा धनी, एक आवश्यक अमीनो एसिड स्वास्थ्य को लागी धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यसको धेरै स्वास्थ्य गुणहरु मध्ये, açaí जामुन प्रतिरक्षा प्रणाली लाई बलियो बनाउन को लागी राम्रो छ, क्यान्सर जस्ता रोगहरु को बिरुद्ध र, उनीहरु भन्छन्, यौन स्वास्थ्य को लागी।
सायद सबै भन्दा राम्रो ज्ञात superfoods को लागी केहि बर्षहरु देखि चिया बीउहरु लाई ती सबै को भान्छा मा उपस्थित छन् जो स्वास्थ्य मा सुधार गर्न खोज्छन्। यो धेरै लाभकारी गुणहरु को एक बीउ भरिएको छ, ती मध्ये, यो आवश्यक फैटी एसिड, क्याल्सियम, म्याग्नेशियम र एक उच्च फाइबर सामग्री मा धनी छ। यी बीउहरु हुन् को लागी राम्रो आन्द्राको ट्रान्जिट, मुटु, मधुमेह वा कोलेस्ट्रोल, अन्य।
यो superfood आवश्यक मानीन्छ, किनभने यसको धेरै गुणहरु को कारण यो स्वास्थ्य को लागी सबैभन्दा लाभदायक मध्ये एक हो। Matcha चिया हरी चिया को एक प्रकार हो कि पानी संग मिश्रित छ, कि, पूरै पाना खपत छ र न केवल जलसेक, जो गुणहरु लाई जोड्दछ। एक शक्तिशाली एन्टिओक्सिडेंट जसले सेलुलर बुढेसकाल रोक्छ, धेरै अन्य स्वास्थ्य लाभहरु बीच।
यो मसला कि अदरक परिवार को एक जरा बाट आउँछ, एक प्राकृतिक विरोधी भड़काऊ मानिन्छ। यो मुटु को लागी राम्रो छ, यो हो विरोधी भड़काऊ, antioxidant र रोकथाम र क्यान्सर को केहि प्रकार को उपचार मा राम्रो.
यी केहि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण superfoods कि ज्ञात छन्, यद्यपि उनीहरु मात्र होइनन्। जे होस् यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ यी खाद्य पदार्थ एक सन्तुलित तरीका मा आहार मा एकीकृत छन्। तब देखि मात्र यसको सबै गुण र स्वास्थ्य लाभ पूरा गर्न सकिन्छ। किनकि यो याद गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ एक स्वस्थ जीवन को स्तम्भ आहार, व्यायाम र स्वस्थ बानी हो.
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » स्वास्थ्य » स्वास्थ्य सल्लाहहरू » Superfoods कि तपाइँ आफ्नो आहार मा शामिल गर्नु पर्छ